လုံးလုံးအိမ် Ultrasonic ရေငွေ့ပျံစိုထိုင်းဆ China Manufacturer
Shenzhen Dituo Electronic Co.,Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်:61% - 70% Cert:ISO9001, CE, EMC, FCC, MSDS, REACH, RoHS, Test Report ဖေါ်ပြချက်:တစ်အိမ်လုံးစိုထိုင်းဆ,တစ်အိမ်လုံးအငွေ့ပျံစိုထိုင်းဆ,လုံးလုံးအိမ် Ultrasonic Humidifier
Home > ထုတ်ကုန်များ > မူလစာမျက်နှာ Humidifier > လုံးလုံးအိမ် Ultrasonic ရေငွေ့ပျံစိုထိုင်းဆ
ဒီ ultrasonic air humidifier သည်သစ်သားများပေါင်းစပ်ခြင်း၊ ခေတ်သစ်နှင့်ခေတ်မီဖက်ရှင်တိုက်မှုများ၊ မိသားစု၏ထူးခြားသောဒီဇိုင်းသည်အလွန်တိတ်ဆိတ်သောအရောင်များကိုသယ်ဆောင်ပေးသည်။ ဤချိုးဖျက်ခြင်းကိုအနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေဘဲတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သောအိမ်ကိုပေးသည်။
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား: 150x150 x232mm
စွမ်းရည် - 400 ml
၁ ။ သစ်သားနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောသစ်သားနှင့်ခေတ်မီသောဖက်ရှင်ကျမှုနှင့်မိသားစု၏ထူးခြားသောဒီဇိုင်းသည်အလွန်တိတ်ဆိတ်သောအရောင်ကိုရရှိစေပြီး၊ ဤချိုးခြင်းကိုမနှောက်ယှက်ဘဲငြိမ်သက်ပြီးသက်သောင့်သက်သာရှိသောအိမ်ကိုပေးသည်။
2. အမျိုးမျိုးသောစိုထိုင်းဆ။ သင်၏လိုအပ်ချက်များအရအားကြီးသောရေမှုန်ရေမွှား mode နှင့်အားနည်းမှုန်ရေမွှား mode ကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
၃။ ရောင်စုံအလင်းများ။ နောက်ခံအလင်းအတွက်အရောင် (၇) မျိုးကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုဖြတ်သန်းရန်သို့မဟုတ်သင်လိုချင်သောအရောင်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ Personal humidifier သည်ညအလင်းရောင်နှင့်အလင်းရောင်အစရှိသဖြင့်လေထုကိုစိုစွတ်စေနိုင်သည်။
Ultrasonic ရနံ့ကုထုံးပျံ့အားဖြင့်4။ ယင်း၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီ၏အနံ့စိုထိုင်းဆကိုထပ်ထည့်နိုင်သည်၊ စိုထိုင်းဆနေရာနှင့်လတ်ဆတ်သောသာယာသောလေနှင့်အတူမွှေးကြိုင်သောအကွာအဝေးကိုခံစားနိုင်သည်။
၅ ။ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုစနစ်ကျရှုံးမှုများနှင့်ရေမရှိခြင်း၊ ရေမရှိလျှင် aromatherapy humidifier သည်အလိုအလျောက်ပြတ်တောက်သွားလိမ့်မည်။ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအန္တရာယ်များကိုစိုးရိမ်ပါ။
လုံးလုံးအိမ် Ultrasonic Humidifier